Ngaba amantombazana ayazi ukuba yonke impawu yeZodiac iya ezithengi ngendlela ekhethekileyo? Zama ukuzibheka ukusuka kwicala, ngaba yinyaniso okanye ngabafundi beenkwenkwezi baphambukisa ukuhlolwa kweempawu ezithile zeempawu ze stellar? Ngoko, luhlobo luni lwabasetyhini abathengwa kwi-horoscope, ukuba ummeli we-Zodiac ...
Umfanekiso oqhelekileyo. Intombazana-u-Ovyvyshla ukuhamba ngaphandle komnqweno wokuya kwiivenkile eziseduze endleleni. Nangona kunjalo, ekuboneni kwindoww "ingubo eyayiyimfuneko kakhulu, kuya kuqinisekiswa ukuyeka kwiziko.
U-Aries akaphenduli kumagqabaza abathengisi kwivenkile, ukhetha ukuzithatha izinto ngokwakhe. Kungenzeka ukuba uya kuzibeka ngokukhawuleza into eye yaxoxwa ngaye, kwaye kuye kuya kuhamba ngaphezu kwemiba yethu. Akunakwenzeka ukuba emva kokubuyela ekhaya kuDame-Aries kubonakala ngathi akaphumelelanga kakhulu ekuthengeni kwaye unokufumana into engcono kuye.
Iingcebiso ngeenkwenkwezi kwintombazana-Aries. Musa ukukhawuleza ukuthenga le nto kwivenkile yokuqala. Zithathele umgaqo wokuqala ukuhlaziya izibonelelo ezivela kwimveliso yefashini ubuncinci kwii-boutiques ezintathu eziseduze.
Nazi iziganeko eziphambili xa uhamba kwiintombi zamantombazana-I-Taurus: ukunyaniseka, ukunyamezela, ukufumana iziphoso, ukuzithemba kuyo yonke into. Ngokungafani no-Aries, intombazana yaseTaurus ayiyiyo yonke into ekuthandwayo kwayo. Umthengisi, ngokuqinisekileyo, uyayiphelela ngokupheleleyo, ukhetha lowo owakhangayo, kodwa uya kuthenga ezimbini ezifanayo ukusetyenziswa kwexesha elizayo.
Iingcebiso ngeenkwenkwezi kwintombazana-iTaurus. Hayi, umrhumo kwifashoni yeTaurus iguqulela ngokuphindaphindiweyo, ikhetha ukukhetha xa kuthengwa enye into. Abavumbuli beenkwenkwezi bancoma rhoqo ngamaxesha ukuba bajonge ukuphononongwa kwefashini kunye nemikhwa eyenziwa ngabaqulunqi behlabathi ukuba bahlale behamba ngeendlela ezifashiswayo zakutshanje.
Iintengiso ezithandayo zamantombazana-iincwadi zeencwadi zeGemini, eziquka iifestile zamaphephandaba. Yaye, xa bathenga iincwadi kuzo, abanakukwazi ukufunda isiqingatha sabo, bephethe amaphephandaba kunye namaphephancwadi kwikhonkco elifihliweyo kwikhaya labo.
Ingcebiso ngeenkwenkwezi kwintombazana-iGemini. Ukuba usenza isigqibo ngaphambi kokuba ushiye indlu oya kuthenga iingubo zasebusika, ungayeki kwi-kiosk yokuqala ye-magazine. Ukulandela ngokuzimisela yakho injongo. Ngaphandle koko, hlala kwakhona ... ngaphandle kwengubo. Kodwa kunye ne-bale yeemagazini zamabhinqa ezimnandi.
Ngubani ngokwenene uncedisa ivenkile yintombazana yeCancer. Unokuchitha iiyure ezithengayo ezithengayo, uthabathe ukuthenga, udibene neepakheji. Yikuphi, nangona kunjalo, ayinzima. Ukuthenga okungakumbi - okuyinto enomdla ngakumbi kwiCarcer. Ekugqibeleni, uRakinische kwaye uthenge izinto zokomoya "ngokwabo," abathandekayo. Ukugqibela kwintengo kunokugqitha konke okuthengwa ngaphambili. Kodwa oku kungomphefumlo!
Iingcebiso ngeenkwenkwezi kwintombazana-uRaku. Qaphela ngexesha lokukhupha, kungenjalo ungalindelanga ngokungazaliseki yonke imali kwikhadi leplastiki. Kwaye enye into - jonga ixesha, kuba ivenkile ibuye ishedyuli yayo yokusebenza. Ngaba ungeke uvalelwe kunye nenkqubo ekhuselekileyo yesitolo esikhulu.
Iindawo ezizithandayo zeenkunzi zeenkunzi zeebhokhwe zi-boutique ze-boutique, izitolo zobomi, izitolo ze-antitique. Intombazana enesibhambathiso iyazamezela ukunethezeka, ubuqili. Kwaye iingubo ezilula zokugqoka iingubo azihambisani naye, zizinto zokugqoka kuphela. Yonke into okanye akukho nto. Unokubonisa ukunyamezela, ukunyamezela kubathengisi.
Iingcebiso ngeenkwenkwezi kwintombazana-ingonyama. Zama ukugcina isandla sakho kwisitolo esilandelayo. Abathengisi abengekho oothixo, kodwa abalawuli kuphela kwiintengiso phakathi kwerhwebo, uphawu kunye nawe. Ukuba ivenkile ayinayo into oyifunayo, khangela le nto kwenye indawo.
Indlovukazi yeentengiso! UMimonikogda akadluli, qiniseka ukuba uthenge into elandelayo kwisaphulelo. Le nto iya kukhonza iNtombikazi ize ihlale igugile kwaye ikhwebu, nokuba ixesha lokuphuma kule fashoni. Ewe, kunye neendawo zangaphandle ezihluphekileyo, iVirgo izakuzama ukuyisebenzisa ngenjongo yokunika, iimfuno zezoqoqosho.
Iingcebiso ngeenkwenkwezi kwintombazana-Virgo. Funda ukudlula ngeempawu ezinkulu ngegama elithi "ukuthengiswa". Izinto ezisezantsi zidayiswa kwaye ziya kuthengiswa. Akunamhlanje, ngoko kusasa kufuneka uthenge into efunekayo ngokwenene.
Amantombazana-iLibra ihlala ilukhuni kunzima ukufumanisa ukhetho kwiindawo zokuthengisa. Xa ucinga ngokuthenga into akukwazi ukuhamba ngeeyure ezimbalwa.
Iingcebiso ngeenkwenkwezi kwintombazana-iLibra. Unganqikazi ukuqhagamshelana nomcebisi wezentengiso ngoncedo ekukhetheni le nto okanye loo nto. Ngoko uya kulahleka ixesha elingaphantsi, kwaye uya kushiya unelisekile ngokuthenga kwakho.
Uthanda kuphi ukwenza intombazana-i-Scorpio? Kakade ke, kwiimakethi zentambo, kwii-commissions, kwiivenkile zesibini, kwiivenkile zamandulo. Nazi izinto nangaphandle kwefashoni, kodwa izitayela "zokuvuna", "retro" -thandwa yi-Scorpions. Ingxaki inokuphela kuphela ngeendleko eziphezulu zezinto ezikhethiweyo. Ngokuqhelekileyo intombazana yeSorpio ayithengi ngokukhawuleza, elindele isaphulelo kuyo.
Iingcebiso ngeenkwenkwezi kwintombazana yaseSorpio. Nangona ngokwenene izinto ze-vintage zibonakala zingavamile, zikhangeleka, zibe zifanelekileyo ngokuchasene ngokupheleleyo nefashoni yanamhlanje. Ngaphandle koko, ungabonakala njengentombazana yentombazana ephuma kwisigogo sikagogo.
Ukukhawuleza, i-impetuosity, ikhethileyo ukwahlula amantombazana-uStreltsov ngexesha lokuthenga. "Into ephambili ihamba ngokukhawuleza!" - isiqubulo sokuqala xa beya kwivenkile. Bangakwazi ukwenza imali kwi-cashashi okanye abathengisi beentengiso. Oku kunjalo emoyeni kaStreltsov.
Iseluleko seenkwenkwezi kwintombazana-Sagittarius. Musa ukuthenga ngaphandle kohlu olucacileyo lokuthenga ekhaya. Njalo ulandele, ungaphambuki kwisicwangciso. Zama ukuzigcina udibanisa nabasebenzi bevenkile - ngokusoloko uphosakele kwiimangalo zabo kwicala labo.
Ubunzima - intombazana-iCapricorn yokuthenga ixesha. Qiniseka ukuba ubuze umthengisi malunga nesiqinisekiso sento, i-Eeskok, ngaphandle koko (ukuba awuyithandi impendulo), kuya kwenzeka ukuba ayithengi. Uthanda ukuthenga okunamandla. Uziva engakhululeki, ukuba akaqinisekanga ukuba uya kukwazi ukumnika isilungiso, ngokungabikho kwesiqinisekiso sokugqibela.
Iingcebiso ngeenkwenkwezi kwintombazana-uCapricorn. Ukukhupha into esuka kwiqoqo lokugqibela, akukho konke okufunekayo ukubala ukuba ungayigqoka kathathu ngonyaka ngokulandelana. Kodwa-ke-ungagcini imali yezinto eziphathekayo eziphezulu.
Ngokwempawu yokuziphatha kwivenkile, amantombazana ase-Aquarius afana kakhulu nalawa "abahlaseli". Ngenxa yokuba ezininzi kwiivenkile zilungele ukungena nonke. Ngaphandle koko, baya kuqokelela yonke into enqoleni yabo eya kubo endleleni. Yaye imali "abathandi bamanzi" eofisini yetikiti ayinakwanela yonke into efakwe kwibhaksi.
Iingcebiso ngeenkwenkwezi kwintombazana-u-Aquarius. Qiniseka ukuba ukhangele esikhwameni sakho sabaseSweden - ngaba ukhohliwe isikhwama sakho ngaphambi kokuba uye esitolo. Yaye qiniseka ukuba ubambe uluhlu lwakho lokuthengwa kwezinto kunye nezinto ozifunayo. Ngomnye umthengisi onikezela ngokukhawuleza njengoko uhlala uhamba, dlula.
Abaphathi beentengiso! Nguye ngokwenene owaziyo ukwenza kakuhle kakuhle, ngokucamngca, ngokucokisekileyo, ngokunyaniseka.
Iingcebiso ngeenkwenkwezi kwiintombazana-iiplisi. Musa ukucwangcisa nayiphi na into ngosuku lwakho lweseshoni. Ngeke ube nexesha eliphumayo elishiywe kwenye ibhizinisi.
Indlela yokuqala incoko nomntu omthandayo?
Indlela yokuziphatha nomphathi
Imveliso equkethe i-folic acid
Ornella Muti amaphupha abemi baseRussia
Indlela yokuzikhusela ekhaya?
Ikhefu ngoMatshi 8, umama ngezandla - zokupheka okumnandi kunye nezithombe. I-"Queen Queen" ekhethiweyo e-movie "ngoMatshi 8" nge-cream kunye neentyantyambo ezivela kwi-mastic
I-Horoscope ye-Aquarius-Abafazi ngoFebruwari 2017